दशककै महंगो विवाह: ८ अर्ब खर्च गरेर छोरीको विवाह, मन्त्र पढ्ने ५ सय पण्डित ! - Everest Dainik - News from Nepal
दशककै महंगो विवाह: ८ अर्ब खर्च गरेर छोरीको विवाह, मन्त्र पढ्ने ५ सय पण्डित !
२०७६, २२ फाल्गुन बिहीबार
एजेन्सीः भारतको कर्नाटक राज्यमा आज अर्थात् मार्च ५ मा यस्तो शाही विवाह हुँदैछ जुन विवाहको चर्चा भारतमा मात्र नभई पुरा विश्वभर चलेको छ । यस्तो भब्य विवाह तपाईको आजसम्म चलचित्रको पर्दामा बाहेक अन्य ठाउँमा सायदै देख्नु भएको छ । यो विवाह बिजेपी नेताको छोरीको हो । उनले विवाहमा मन्त्र पढ्न मात्र ५ सय पण्डित बोलाएका छन भने विवाहमा ८ अर्ब खर्च गरेका छन्।
याे पनि पढ्नुस छोराको विवाह गर्न पुगेका बाबु सम्धीनी लिएर भागेपछि ..
कर्नाटक राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री बी श्रीरामुलुले खर्चमा इतिहास रच्दै छोरीको विवाह गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। कर्नाटकमा भारतीय जनता पार्टीका संकटमोचक भनेर समेत चिनिने दलित नेता श्रीरामुलुले छोरी रक्षिताको विवाह आजलाई तय गरेका थिए।
छोरीको विवाहमा नेताजीले पानी झैँ गरी पैसा बगाउँदैछन् । मन्त्रीकी छोरीको बिहे हैदरावादका एकजना उद्योगपतिसँग हुन लागेको हो। ५ तारिखमा हुने विवाहको पूजाआजा तथा भोजभतेर फेब्रुअरी २७ देखि नै सुरु भईसकेको थियो । ९ दिनसम्म चल्ने उक्त समारोह भारतमा यो दशककै सबैभन्दा महंगो विवाह भएको बताईएको छ ।
याे पनि पढ्नुस गर्भ एउटाको, विवाह अर्कोसँगै भएपछि ....
यसअघि कर्नाटकमै जनार्दन रेड्डी नामका नेताले छोरीको बिहेमा करोडौँ खर्च गरेर सबैभन्दा महंगो बिहेको रेकर्ड रोखका थिए। अब भने जनार्दनको रेकर्ड श्रीरामुलुले तोडेका छन। मन्त्रीले छोरीको बिहेमा भारतका शीर्ष नेताहरुसँगै ५ सय पण्डितलाई समेत निमन्त्रणा गरेका छन्।
विवाहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित १ लाख पाहुनाहरुलाई निम्तो कार्ड पठाएका छन्। निम्ताकार्ड सँगै केशर, सुकुमेल, सिन्दुर, बेसार तथा अक्षता पनि पठाइएको छ। ४० एक्कड क्षेत्रफलमा फैलिएको प्यालेस ग्राउण्डमा उक्त बिहे समारोह हुँदैछ। जसमध्ये १५ एक्क्ड त गाडीको पार्किङका लागि मात्र छुट्टाइएको छ। पछिल्लो ३ महिनादेखि बिहेको मण्डप निर्माण कार्य भईरहेको थियो।
ट्याग्स: भारतीय जनता पार्टी, विवाह